Crossword 🥇 Tinye ma nwee obi ụtọ site na emulator.online
Ihe ngosi 2d
Ihe ngosi 3d
Ngwa na mmekọrịta
The Sims 4 Blog
Otu esi eme
Zụrụ ugbu a
Ndị ọka iwu
PC na Mobile
Na mgbakwunye na nke a, ịkwesịrị ịmatakwu banyere ya.
Isi Okwu. Ugbu a, anyị ga-egosi gị ihe niile ịchọrọ ịma iji ghọta egwuregwu a mara mma. Site na ihe omimi ya, mmalite ya, uru ya, ihe omimi nke di adi na usoro iji dozie ya ngwa ngwa ma ngwa ngwa.
Isi okwu: Otu esi egwu ebe site na isi 😀
Imere a Isi Okwu online n'efu, naanị ị ga-eme soro ntuziaka ndị a nzọụkwụ site nzọụkwụ:
Mepee ihe nchọgharị gị masịrị ma gaa na saịtị egwuregwu Emulator.online.
Ozugbo ị banyere saịtị ahụ, a ga-egosipụta egwuregwu ahụ na ihuenyo ahụ. Kwesịrị naanị họrọ asụsụ na edemede kachasị amasị gị. Otu n'ime edemede ndị ị nwere ike ịchọta bụ: Mkpụrụ osisi, kọmputa, anụmanụ anụmanụ, Akwụkwọ nri na egwu
Ugbu a, ị ga-ahụ ụfọdụ bọtịnụ bara uru. Nwere ike "Tinye ma ọ bụ wepu ụda", Nye bọtịnụ"Play"Ma malite igwu egwu, ị nwere ike"Kwụsịtụ"na"Malitegharịa ekwentị"N'oge ọ bụla, Dịkwuo nha ihuenyo ma ọ bụ ihe ọzọ egwuregwu ọpụpụ.
Ọ na-ejikwa jikọtara nke ọ bụla n'ime ibe ya n'ụzọ ọ bụla iji kee ihe oyiyi ị họọrọ.
Mgbe ịmechara egwuregwu, pịa "ọpụpụ egwuregwu" ime okwu ndi ozo.
¿Otu esi edozi okwu?🖊
Ugbu a, anyị na-egosi gị aghụghọ asatọ ga - enyere gị aka inwe ọganihu n'ụzọ ị ga - esi mee okwu mkpirisi:
1- Guo nke obula
Ihe mbụ ị kwesịrị ime mgbe ị na-amalite crossword bụ guo ihe omuma niile site na elu rue na ala ma tinyekwa uzo di nfe. Ọ bụ ihe amamihe dị na ịga n'ihu n'otu ụzọ a kapịrị ọnụ. Aka ekpe gaa aka nri ma ọ bụ nke ọzọ wee ga elu na ala dabara. Pụrụ ijide n'aka na i dere ọ bụla na ihe ọ bụla mara ihe ngwọta.
Ọ bụrụ, n’aka nke ọzọ, ị ga-ahọrọ ajụjụ ndị ahụ n’echebaraghị ha echiche ma gafere ha, ikekwe ụfọdụ igbe dị mfe gafere n’ihu gị n’agaghị ama.
Mgbe ịmechara isiokwu mbụ nke isiokwu a, ị kwesịrị ị ga ugbu a gaa ajụjụ siri ike ị na-azatabeghị. Nke a na-eme ka ịkọ nkọ dị mfe maka akụkụ ndị a ma ị nwere ike ịmalite karịa agba nke abụọ.
Ugbu a ọ dị mfe ịza ajụjụ ndị na-enye ọtụtụ azịza ga-ekwe omume. Iji mee ihe atụ, ọ bụrụ na ị na-achọ a njiko onwe onye nwere mkpụrụedemede 3 , ị ka nwere ike ịhọrọ n'etiti ME, UN, US, wdg. Ọ bụrụ na i mechaala otu ma ọ bụ akwụkwọ ozi abụọ na nke mbụ, enwere ike iwepụ ụfọdụ nhọrọ ugbu a na nke kachasị mma, naanị otu ụzọ fọdụrụ.
2- Jiri akara
Ọ bụrụ na a ka nwere ọtụtụ azịza nhọrọ maka ajụjụ ma ọ bụ, n'ozuzu, ị maghị nke ọma azịza ya, Jiri nwayọ tinye okwu ụfụ na mkpịsị odee. Ọ bụrụ na, ka ị na-aga n’ihu ịza ajụjụ ahụ, achọtara mkpụrụedemede ọzọ maka okwu ị na-achọ, ị ga-ahụ ma echiche mbụ gị ọ ziri ezi ma ọ bụ na ọ bụghị.
Mgbe ụfọdụ ọ na-adị mma ichere ruo mgbe e nyere ọtụtụ mkpụrụ akwụkwọ maka okwu a na-enyo enyo. Ọ bụrụ na ọ bụ naanị otu, dị ka ọmụmaatụ Y na oke, ihe puru omume dị oke elu na ọtụtụ ọdịiche ka nwere ike ịdị. Na ihe ga-aka mma ka ị chere obere oge. Y'oburu na oji n'aka na okwu ichoro dabara gi, inwere ike ileba ya anya.
3- Were ezumike🙂
Ọ bụrụ na ịraparala n’otu okwu ruo ogologo oge, ị nweghịkwa ike ịga n’ihu n’okwu nkọwa ahụ, ị ​​gaghị atụ egwu Were ezumike. Debe ihe omimi ahu, kpochapu isi gi ma mee ihe ozo.
Ọ bụ ihe ijuanya na, mgbe oge ụfọdụ gachara mgbe ị na-agụghachi ajụjụ, na mberede ị nwere mmetụta ịtụnanya ebe etinyere gị na mbụ. Oge anaghị adị oke egwu mgbe ị na-edozi okwu ọ bụla. Ihe bụ isi bụ na ihe ịma aka ahụ na-atọ ụtọ.
4- Chọọ akụkọ mkpuchi
Ọ bụghị nke ọ bụla isiokwu okwu omimi nwere otu isiokwu aha. Ọzọ ọ bụrụ na e nyere ihe kpatara ya ma ọ bụ isiokwu na isi okwu, ị nwere ike ịtụ anya na akụkụ ụfọdụ nke ajụjụ na azịza na-eche kpọmkwem na nke ahụ.
Yabụ na nke a apụtaghị na mkpụrụokwu ọbụla dabere na ya. Karịsịa, obere okwu ntanye, dị ka nnochi aha, ndebiri, na ihe ndị ọzọ, agaghị adabere na isiokwu. Mana ọ bụrụ na enwere isiokwu ekeresimesi ma ọ bụ oge oyi n’isi okwu, osisi nwere mkpụrụedemede 5 nwere ike ịbụ FIR karịa OAK.
Nke a na-enye aka ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịga n'ihu na ajụjụ nwere ọtụtụ azịza. Ya mere buru n'uche isiokwu ahụ, ọ ga-eduzi gị n'ụzọ ziri ezi.
5- Chọọ okwu site na asụsụ ndị ọzọ
na ntụgharị okwu a na-ejikarị ha achọ okwu n'asụsụ mba ọzọ. Agbanyeghị, ịnwere ike ijide n'aka na n'ozuzu ọ gaghị esiri gị ike ịkọwa okwu. Ọtụtụ oge, ọ bụghị maka ịmụ asụsụ ọzọ n'ụzọ zuru oke iji dozie ajụjụ ahụ. Kama, ọ bụ n'ụzọ doro anya obere mkpụrụokwu nwere ike ịbata bata n'asụsụ gị n'ozuzu iji asụsụ ahụ eme ihe. Dị njikere na ị nwere mkpụrụedemede ụfọdụ maka okwu ị na-achọ, mgbe ahụ ọ ga-adị mfe ịkọ nkọ.
6- Chọpụta ụdị okwu ị na-achọ
Mgbe ụfọdụ ọ nwere ike jiri akara ajuju ka ịhụ kpomkwem akụkụ nke esemokwu a ga-ekewa azịza ya. Nke a na - enye gị ohere ide ngwụcha n’udo. Mgbe ị na-achọ ngwaa, ha na-ejikarị otu ụzọ. Ọ bụ otu ihe ahụ okwu otutu. O buru na ichoro otutu okwu, o gha aghaghi idi -bụ ma ọ bụ -s.
N'otu akụkụ, ị nwere ike iji ya tinye mkpụrụ edemede ikpeazụ nke mkpụrụokwu, ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụghị n'aka nke dum okwu. N'aka nke ọzọ, mkpụrụedemede ole na ole na ngwụcha okwu ahụ na-enyere aka ịkọ nkọ karịa okwu gafere ya ọsọ ọsọ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị maghị maka njedebe kwesịrị ekwesị, tinye ya na pen maka ugbu a.
7- Otutu okwu okwu a putara
Na ajụjụ ụfọdụ ị ga-ele anya karịa otu ugboro. Ọfọn ma eleghị anya jụọ onwe ya ịbụ ambiguous. Nke mbu, n'ihi n'eziokwu na okwu dị na ajụjụ ahụ nwere ike ịnwe nkọwa dị iche iche, iji bụrụ ihe atụ na Banco. Ọ bụrụ na ajụrụ gị ihe ị na-eme n'ụlọ akụ, ị kwesịrị iburu n'uche na ọ nwere ike ịpụta ma ụlọ akụ oche na ụlọ akụ na-ahụ maka ego.
Mgbe ahụ azịza ya nwere ike "nọdụ ebe ahụ" Oma "itinye ego ego ".
O nwekwara ike ibu ihe edetu ma obu ilu ya. Tụgharị uche na nkuku dị mkpa mgbe ụfọdụ ebe a. Emela oge niile na oge niile na -echekarị ihe okwu pụtara, kamakwa gbalịa iburu ọkwa ndị ọzọ. Iji jee ozi dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ajuo gị ụzọ ịga Rome, ị kwesịghị ịkpọ aha okporo ụzọ ma ọ bụ ụzọ a kapịrị ọnụ, mana azịza ya nwere ike ịbụ ALL, dị ka okwu a si kwuo "Roadszọ niile na-eduga Rome".
8- Mgbe ihe ọ bụla na-enyere aka ...
Ọ bụrụ n ’ịgbaso ndụmọdụ ndị a ugbu a ka na-enweghị ike ịga n’ihu n’okwu ụfọdụ, enweghị isi n’ịjụ ụfọdụ ndụmọdụ. Otu a ka odi jụọ maka ndụmọdụ nye ụfọdụ ndị enyi ma ọ bụ ndị ochie amaala ma ọ bụ jiri akwụkwọ ọdịnala ma ọ bụ dijitalụ.
Ya mere bụrụ Akwụkwọ ọkọwa okwu, akwụkwọ ọkọwa okwu ma ọ bụ akwụkwọ nkà ihe ọmụma, ikekwe otu n’ime ha nọ n’ụlọ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-agagharị ma na-edozi isi okwu ahụ na ọnọdụ dị iche, ịnwere ike ịhọrọ ọtụtụ onyinye dị n'ịntanetị maka ihe enyemaka.
Anyị nwere olile anya na ozi a baara gị uru. Ma, ọ bụrụ na ị dị njikere ugbu a, anyị na-eche ka ị bido ịme nke gị isi okwu.
Gini bu okwu nkowa?📚
na ntụgharị okwu Ha bụ ihe eji egwuri egwu mejupụtara ọtụtụ oghere ndị ị na-enwerịrị ike ịmechaa egwuregwu ahụ. Chọta mkpụrụokwu ọ bụla site na iji ndụmọdụ efu. Dị ka okwu ụfọdụ zuru ezu, mkpụrụ akwụkwọ ụfọdụ na mkpụrụ okwu ndị ọzọ na-apụta na akpaghị aka, na-eme ka mkpebi dị mfe. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị na akwụkwọ akụkọ na gazettes na, ya mere, ha na-enwekwa ihe ịga nke ọma na Internetntanetị.
La Isi okwu na-agbanwe dị ka usoro na ọnụ ọgụgụ nke okwu. Obere okwu a gafere karịa na ka okwu egwuregwu nwere, o nwere nnukwu ohere na egwuregwu ahụ ga-esi ezigbo ike. Na mgbakwunye na nke a, ogo nke mgbagwoju anya na-agbanwe dịka isiokwu nke isiokwu ahụ, yabụ ọ bụrụ na ị mụta igwu egwu, họrọ isiokwu ịchọrọ ma nwee ihe ọmụma banyere ya.
Crosswords dị ugbu a otu n'ime ihe omume ntụrụndụ kachasị ewu ewu, ọ bụ ezie na ha efunahụ ala n'ihu egwuregwu ndị ọzọ dị ka sudoku. Enweghị akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ ọ bụla nke na-enweghị ngalaba ntụrụndụ nke na-agụnye otu ma ọ bụ karịa ntụpọ ntụpọ. Ma olee mgbe ha malitere?
Akụkọ banyere Crosswords🤓
El okwu mbu na anyị maara mere na December XNUMX, XNUMX, mgbe akwụkwọ akụkọ Newbọchị Sunday New York World bipụtara a mgbaghoju anya a na-akpọ "isi okwu", mepụtara site na Arthur Wynne, onye England na-ede akụkọ na Liverpool. Ihe mgbagwoju anya bu ndi ohaneze meriri ma buru ndi mmadu na-acho akwukwo kwa izu.
N'agbanyeghị ihe ịga nke ọma ya, Waswa bụ naanị akwụkwọ akụkọ bipụtara ihe omimi a ruo 1924, n'oge onye mbipute mbido wepụtara mkpokọta mkpokọta nke okwu mkpirisi bipụtara site n'oge World, n'usoro akwụkwọ. Simon & Schuster kwalitere nzuzu ọhụrụ nke ga - aghọ otu n'ime ndị nkwusa kachasị ukwuu na mbara ala.
Okwu osisi- singdị acrostic dị iche iche nke nwere mkpụrụedemede leta edepụtara na 'grid', ka e wee nwee ike ịgụ otu mkpụrụokwu ahụ ma ihu igwe ma kwụ ọtọ, malite n'oge ochie.
Nna nna nke Crossword
Achọpụtara nna nna ochie a maara nke ọma na okwu mgbagwoju anya n'obodo Thebes n'ili nke nnukwu onye nchụàjà Neb-wenenef a họpụtara maka ọrụ ahụ n'ime afọ mbụ nke ọchịchị Ramses nke Abụọ, pharaoh nke usoro ndị eze nke XNUMX (XNUMX - puku) narị abụọ tupu Kraịst). N'aka ekpe nke paseeji na-eduga n'ọnụ ụlọ dị n'ime ili, a nnukwute nkume e dekọrọ ihe oyiyi ụmụ mmadụ na usoro ihe odide haeroglyphs.
Ihe odide a nwere naanị ekpere dị iche iche kwesịrị otuto banyere chi Osiris, onye na-echebe onye nwụrụ anwụ, dị ka a na-eme n'oge ahụ. Ọzọ Otú e si hazie ihe odide ndị ahụ tụrụ ndị ọkà mmụta ihe ochie anya. Kpamkpam enwere uzo iri na otu. N'etiti ha kpọmkwem, a kọlụm akara iji gosipụta na ihe odide ahụ, na-agụ ogologo, nwekwara ezi uche.
Kemgbe ahụ ọ gara n'ihu ịgbasa na ụwa dum, na-aghọ dị mkpa na akwụkwọ akụkọ ọ bụla ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ ọ bụla.
Crosswords nwere ụdị dị iche iche. Enwere ike ịkọwa ha n'ime ụwa niile, akara ngosi, aha, na-ezighi ezi, site na ndọtị, na ịkọ nkọ. Na crosswords na a "mfe" larịị, na Nkọwapụta aha, na-esochi ịgba afa. Na ndị nọ n'ọkwa "siri ike nke ukwuu", ọnọdụ a tụgharịrị: a Nkọwa site n'ịgba afa na-esochi aha.
Agbanyeghị, a na-egosi mkpụrụokwu dị iche iche. Ka anyị lee ihe ha bụ:
Ọ bụ ụdị nke crossword na ya enweghị oghere ojii, ebe onye so na ya gha aghaghi ichoputa onodu ya.
Onye ntụgharị okwu ma ọ bụ Asụsụ abụọ
Isi okwu a na-eche ihu ịmụ a asụsụ ọhụrụ.
Isi Okwu Asụsụ Syllabic
Ọ bụ ụdị modality nke igbe ọ bụla ga-abanye otu mkpụrụedemede kama inwe otu mkpụrụ akwụkwọ.
Isi okwu na agwa
Kinddị okwu a na-ewu ewu taa. Nwere foto nke agwa ebe otu ma ọ bụ ọtụtụ nkọwapụta dakọtara na aha ma ọ bụ aha nna nke otu ihe ahụ.
Isi Okwu Uchechukwu
Na usoro mgbagwoju anya a jiri ahịrịokwu na-ezo ntuziaka iji wulite ma ọ bụ chọpụta azịza n'etiti okwu ahịrịokwu ahụ. Ọ bụ otu ihe na mbụ na UK ebe isi okwu sitere na Times pụtara.
Onye na-akwa iko
egwuregwu mgbagwoju anya
Hapụ azịza Kagbuo azịza
Etu esi ejikọ Alexa na oku
Tọghata Video ka MP4 ka DVD na DVD ka MP4
Mbadamba ụrọ maka ụlọ akwụkwọ: nke ị ga-ahọrọ
Jiri onye ntụgharị okwu ozugbo: Smartphone ma ọ bụ ngwaọrụ iji zụta
Ndị ọzọ na TeamViewer maka enyemaka dịpụrụ adịpụ
Iwu mara na ojiji
Ọ bụrụ n’ịnọgide na-eji saịtị a, ị ga-anabata ojiji nke kuki. Ozi Ndị Ọzọ